တကယ်ပူးတာလား အလေ့အကျင့်လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တကယ်ပူးတာလား အလေ့အကျင့်လား
Posted by ကြောင်လေး on Dec 12, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., Think Different | 15 comments
တကယ်တော့ နတ်လို့ အများသုံးနှုန်းနေကြတဲ့ ပရလောက မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။
ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို အစဉ်အလာအရ သော်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်စရာကောင်းလောက်တဲ့မျက်မြင်အရသော်လည်းကောင်း ဇွတ်မှိတ်မယုံလိုက်ပဲနဲ့
အရင်းအမြစ်ကိုသေချာလေ့လာသုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ယုံစေချင်တာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံပတ်သက်ခဲ့တဲ့ တကယ့်အဖြစ်မှန်ကလေးတွေကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ကျနော်ငါးတန်းကျောင်းသားဘ၀က အဖေတာဝန်ကျတဲ့ ၀ါးခယ်မမြို့ကိုလိုက်သွားပါတယ်။
အဖေတာဝန်ကျတာမြို့ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ ကျနော်က မြို့ပေါ်က အဒေါ်အိမ်မှာနေပြီးကျောင်းတက်ပါရတယ်။ မြို့ပေါ်ဆိုပေမဲ့ မြို့ရဲ့တဘက်ကမ်းမှာပါ။ငှက်သမ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ အမြီးနှစ်ခွ လက်ခပ်ကူးတို့လှေနဲ့ ကူးရတာပါ။
၀ါးခယ်မမှာ တနှစ်တစ်ကြိမ် ဦးရှင်ကြီး၊ ကိုးမြို့ရှင်နဲ့ ရိုးရာနတ်တွေပူဇော်ပွဲကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျဉ်းပပါတယ်။
တနှစ်တစ်ကြိမ်ဆိုပေမဲ့ မြို့ဘက်ကမ်းကတစ်ကြိမ် တဖက်ကမ်း(တရုပ်တန်း)ကတစ်ကြိမ်သီးခြားစီလုပ်တာပါ။
အခုတော့ ဘယ်လိုလဲမသိပါ။ တရုပ်တန်းဘက်မှာ ပူဇော်ပွဲမလုပ်ခင်တစ်လလောက်ကတည်းက အလှူ လိုက်ခံပါတယ်။ အလှူခံတဲ့အခါ ဦးရှင်ကြီးရဲ့ စီးတော်ကျားအ၀တ်အစားဝတ်ထားသူတစ်ယောက်ပါ ပါတယ်။ အဲဒီ ကျားလုပ်မဲ့လူဟာ မလုပ်ခင်တစ်လလောက်ကတည်းက သက်သပ်လွတ်စားပြီး ဥပုသ် စောင့်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ လူတိုင်းလုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့။ ငွေလှူတဲ့သူအိမ်ရှေ့မှာ သူက နဲနဲပါးပါး ကျားရေးပြပါတယ်။ တရုပ်နှစ်ကူးမှာ တရုပ်နဂါး(ခြင်္သေ့)လိုက်ကသလိုမျိုးပါ။ အိမ်အ၀ကိုလည်းဝင်ပြီး အရှင်ကြီးကအကာအကွယ်အစောင့်အရှောက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ပါတယ်။
ငွေများများထည့်တဲ့အိမ်ဆိုရင် စီးတော်ကျားက မောင်ရှင်တကယ်ဝင်ပြီး အုံးသီးကိုပါးစပ်နဲ့ ခွဲ(အမှန်တော့အပေါ်ခွံခွာတာပါ) ပြပါတယ်။ ကျနော်အဒေါ်က နေ့လည်ကတည်းက အုန်းသီးစိမ်းတစ်လုံးခူးထားပြီးအလှူခံ လာတော့ နှစ်ထောင်ထည့်ပါတယ်။ ဟုတုန်းက နှစ်ထောင်ဆိုတာတော်တော်များသားကလား။ စီးတော်ကျားလည်း လက်အုပ်ကလေးချီရာကနေ ပါးစပ်လေးပွစိပွစိလုပ်ရင်းယိမ်းထိုးလာပြီး ကျွမ်းတချက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်း ဘေးကိုရှဲသွားပြီး လက်အုပ်လေးတွေချီလို့ ပေနှစ်ဆယ်ပတ်လည်လောက် ၀ိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သွားပါတယ်၊ အိမ်ပေါ်က တစ်ယောက်က အသင့်ဆောင်ထားတဲ့အုန်းသီးကိုပစ်ချပေးလိုက်ရင် ကျွမ်းပစ်ဖမ်းပြီး ကျားလိုဝတ်ထားတဲ့သူက မျောက်လို အုန်းသီးကိုမြှောက်လိုက် လှိမ့်လိုက်၊ နမ်းလိုက် မြေပြင်ကိုချလိုက်နဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက်လုပ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာကျနော်သတိထားမိတာက ကျနော်အဒေါ်အိမ်ရှေ့က မြေပျော့ပါ။ လမ်းကတော့ ကျောက်ကြမ်းတွေခင်းထားတဲ့လမ်းကြမ်းပါ၊ အိမ်ရှေ့နဲ့ နှစ်လံလောက်ဝေးပါတယ်။ မျောက် အဲလေး ကျားက ကျွမ်းပစ်ရင်း အုန်းသီးကိုလမ်းကြမ်းဘက်ယူလိုက်ပြီး ကျောက်ခဲပေါ်မြှောက်ပစ်ချလိုက်တယ်၊ပြီးမှပြန်ကောက် ၊ နမ်းလိုက် မြေပြင်ပေါ်လှိမ့်ပြီးအလှပြလိုက်၊ ကျောက်ခဲနဲ့ ကိုင်ဆောင့်လိုက် အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီး အပေါ်ခွံမွသွားမှ ပါးစပ်(သွား)နဲ့ ကိုက်ဖဲ့ပါတော့တယ်။ လူတွေကတော့ တအံ့တသြပေါ့။ ကျနော်ကတော့ အဖေ အစကတည်းကပြောထားတော့ မယုံကြည်တော့သေချာကြည့်နေတာပေါ့။
ပြီးတော့ ကလေးဆိုတော့ ပြောသင့် မပြောသင့်မစဉ်းစားပဲ၊ “ကျားကလည်း အုန်းသီးကိုကျောက်ခဲပေါ် ကိုင်ဆောင့်နေမှတော့ ခွာလို့ရတော့မှာပေါ့” လို့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ထအော်လိုက်ပါတယ်၊ ကျားလည်းကျနော့ ကိုတချက် စွေကြည့်ပြီး အုန်းသီးကိုမြှောက် ပြန်ဖမ်းကျောက်ခဲပေါ် ခွမ်းကနဲ ရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးအုန်းရေတွေကိုမော့သောက်နေပါတယ်။ ဒါဟာ မောင်ရှင်တကယ်ဝင်ပူးတာလား၊ သူနှစ်စဉ်လုပ်နေကျ သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။စဉ်းစားစရာပါ။
နောက် လယ်ကွက်ထဲမှာ ဇာတ်စင် အကြီး ကြီးဆောက်ပြီး ပူဇော်ပွဲကျင်းပ ပါတယ်။ အဲဒီမှာမောင်ရှင် တင်မက၊ ကိုးမြို့၊ မြင်းဖြူရှင် ၊နဲ့ အမျိုးသမီးနတ်တွေလည်းအစုံပါ ပါတယ်။ အဒေါ်ကလည်း အဓိက အလှူရှင် ဆိုတော့ ကျနော်တို့ က ဇာတ်စင်ရဲ့အပေါ် အနော်ကဖက် ကန့်လန့်ကာတွေရဲ့နောက်က တက်ကြည့်ခွင့် အထူးအခွင့်အရေးရပါတယ်။
အဲဒီမှာ နတ်(၀င်သည်)တွေ ဟာ ဇာတ်ခုံပေါ် တစ်ယောက်တလှည့်တက်ပြီး အဖေကြီးက သားတော်သမီးတော်လေးတို့ ကို(ရပ်ကွက်ကို) ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မယ် ဘယ်တုန်းက ဘာဖြစ်တာကို သူဘယ်လို ကာကွယ်လိုက်လို့ ဘယ်လောက် သက်သာရာရတယ်၊ နို့မို့ဆိုမလွယ်ဘူး၊ ဘယ်သူကဘာဖြစ်လို့ ဘယ်လိုခံရတယ်(သူ့ဟာသူသံစူးလို့ အဖျားတက်တဲ့သူကို) ဘာညာ ဆိုပြီး ခေါင်းလေးတစ်ခါခါ ကိုယ်လေးတလှုပ်လှုပ်နဲ့ ပြောကြပါတယ်၊ လူတစ်ယောက်က မိုက်ကလေးကိုကိုင်ပြီး နတ်(၀င်သည်) ကပြောရင် မိုက်လေးပါးစပ်နားတေ့ပေးလိုက် ၊ ပြီးရင် မိုက်ကိုပြန်ယူပြီး မှန်လှပါ အရှင်ကြီး၊မိန့်တော်မူပါအရှင်ကြီး စသည်ဖြင့်စကားထောက် လုပ်ပေးရပါတယ်။
မြင်းဖြူရှင်အလှည့်ကိုရောက်လာပါတယ်။ မြင်းဖြူရှင်နတ်(၀င်သည်) က မြင်းကိုခွမစီးပါဘူး၊ လူ့ခန္တာကိုအချိုအစားနဲ့လိုက်မယ့် မြင်းရုပ်ကို ခေါင်းပိုင်းကိုဗိုက်မှာကပ်၊ဖင်ပိုင်းကို ကျော(တင်ပါးအထက်)မှာကပ်ပြီး ခါးပတ်ပတ်သလို ကြိုးနဲ့ချီထားတာပါ၊ ပြီးမှ ချုသံလေးတချွင်ချွင်နဲ့ မြင်းစီးသလို ခပ်ကြွကြွလေး ခုံဆွ ခုံဆွ သွားပါတယ်၊ မြင်းရဲ့ ရှေ့ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ နော်ခြေနှစ်ချောင်းက လေထဲမှာ တွဲလဲလေးပေါ့၊ လူခြေနှစ်ချောင်းပါထည့်ရေတွက်လိုက်ရင် ခြေခြောက်ချောင်းနဲ့ မြင်းပေါ့။
နတ်စာသားတွေရွတ်ဆိုပြီးဇာတ်စင် ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ် ရှေ့နောက် ကြွကြွရွရွလေးပြေးပြီး မြင်းရေးပြပါတယ်။ပြီးတော့ စကားထောက်နားအသာကပ်ပါးစပ်လှုပ်ပြီးပြောပါတယ်၊ စကားထောက်ကလည်း မြင်းဖြူရှင်ဝင်နေပြီဆိုပြီး ရိုရိုသေသေနဲ့ မိန့်တော်မူပါအရှင်ကြီး ဆိုပြီးမိုက်ကို ပါးစပ်နားထိုးပေးပါတယ်။ နတ်ကလည်း ပါးစပ်ကိုစိပြီး ၀မ်းခေါင်းသံခပ်တိုးတိုး (ဟင်း)ဆိုပြီး ခါးကိုမျက်စပစ်ပြတယ်၊ ကိုယ်ကတော့ လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့ ခါးကိုထောက်ပြီး နတ်ဝင်နေတဲ့ပုံလုပ်နေတယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ စကားထောက်ကလည်း မိန့်ပါအရှင် သားတော်လေးတို့ကိုဘာညွှန်ပြချင်ပါသလဲဆိုပြီးမိုက်ထိုးပေး၊ နတ်ကလည်းဘာမှမပြောပဲ ပါးစပ်ကြီးစေ့ပြီး တဟင်းဟင်း နဲ့ လုပ်၊ စကားထောက်လည်း နတ်ကစကားမပြောတော့ကြောက်ပြီး၊ အမိုက်အမဲလေးတွေကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ ဘာများအမှားလုပ်မိလို့ပါလည်း၊ သနားသောအားဖြင့် မိန့်ကြားညွှန်ပြတော်မူပါပေါ့၊ အောက်ကပရိတ်သတ်တွေထဲလည်း အသံတွေထွက်ပြီး ရွစိရွစိတွေဖြစ်လာ၊ ဇာတ်စင်ပေါ် ကားလိပ်နောက်ကလူတွေလည်းမတ်တပ်ရပ်သူရပ် ခေါင်းထောင်သူထောင်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘာများဖြစ်သလဲ ဆိုပြီး လန့်နေပါတယ်။ စကားထောက်လည်းမျက်နှာပျက် အသံတုန်လာပြီး အရှင်ကြီးဘာများအလိုရှိပါသလဲ သားတော်လေးတို့ ဖြစ်အောင်ဆောင်ကျဉ်းပေးပါ့မယ်၊မိန့်ကြာတော်မူပါအရှင်ကြီး ဆိုပြီးထပ်ပြောလို့ မိုက်ကိုထိုးပေးလိုက်တယ်။ နတ်ကလည်း မင်းလာခဲ့ လို့ တစ်ခွန်းတည်းပြောပြီး ကျနော်တို့ ရှိတဲ့ ကန့်လန့်ကာနောက်ဖက်ကိုဝင်လာပါတယ်။ စကားထောက်လည်း ခပ်ကုပ်ကုပ် နဲ့လိုက်လာပြီး မိုက် ကို ထိုးပေးလိုက်တော့ နတ်က မိုက်ကိုလက်နဲ့ဖယ်လိုက်ပြီးလေသံခပ်အုပ်အုပ်နဲ့ ပြောလိုက်တာက
“ဟေ့ကောင် ဒီမှာခါးကြိုး ပျီ(ပြေ)နေတယ်ကွ သေချာပြန်ချီပေးစမ်းပါအုန်း” တဲ့ ။ ကျနော်လည်းပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ အုပ်ပြီးတခွိခွိ ရယ်နေပါတယ်၊ အတူပါလာတဲ့ အမ ၀မ်းကွဲက ဟဲ့ကောင်လေး အသာနေစမ်း၊ ဟိုတစ်ခါလည်းအိမ်မှာပြဿနာရှာတယ် ဆိုပြီးခါးကိုလိမ်ဆွဲလိုက်မှ ကျနော်လည်းမျက်နှာပိုးသတ်နေရပါတယ်။ သူတို့လည်းလုပ်စရာရှိတာလုပ်ကာ ရှေ့ကိုပြန်ထွက်သွားပြီး လိုအပ်သည်များကို မိန့်ကြားပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
နောက်နေ့မနက် ကျောင်းသွားတော့ ကူးတို့ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းကို ညကအတွေ့အကြုံပြောပြရင်းနောက်တစ်ခုကိုပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒါက ပွဲမစခင် ပွဲခင်းထဲလျှောက်သွားတုန်းစင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ လူကိုယ်လုံးလောက်ရှိတဲ့ဦးရှင်နဲ့ ကိုးမြို့နတ်ရုပ် ကြီးတွေမှာ အခု ဘုရားရုပ်တုတွေ မှာ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်တဲ့ပုံစံ မီးဝိုင်းတွေ တပ်ဆင်ထားတာပါ၊ နတ်က ရောင်ခြည်တော်လွှတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကိုသူငယ်ချင်းကိုပြောပြီးဝေဖန်တာပေါ့။ လောကမှာ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်တာဟာ ဘုရားတစ်ပါးပဲ ရှိတယ်၊ နတ်တွေကိုအဲလို မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့၊နောက်ပြီး အုန်းသီးခွာတဲ့ ကိစ္စ ကျနော်သုံးသပ်ချက်တွေပြောပြတာပေါ့။ ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့လူကြီးတွေက ကျနော့ကိုဝိုင်းကြည့်နေတော့ ကိုယ့်ကို ကို ဟုတ်လှပြီ ထင်ပြီး စွတ်ပြောနေတာ၊ ကျနော့နောက်ကျောကိုရေတွေ ဖြန်းကနဲလာလာစင်တာသတိမထားမိဘူး။ နောက်ဆုံးတချက်ကျနော့နောက်ကျောတစ်ခုလုံးရေတွေရွှဲသွားပြီးဘေးက ရပ်နေတဲ့သူတွေပါရေတွေစင်ကုန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေက လှေဝမ်းထဲမှာ ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး လှေဘောင်ပေါ်နောက်ကျောပေးပြီးထိုင်ကြတာပါ။ လူများရင် တချို့ ကလှေဝမ်းထဲ မတ်တပ်ရပ်၊တချို့ ကလှေဦးပေါ်စောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပါတယ်၊ ရန်ကုန်ကူးတို့တွေလို ထိုင်ခုံ မထားပါဘူး၊ မြစ်သာဆိုတယ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ။ ဟိုဘက်ကမ်းဒီဘက်ကမ်း “ဟေး…….ကူးတို့ ” လို့လှမ်းအော်ခေါ်လို့ရပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ အဲဒီကူးတို့ခပ်တဲ့သူဟာကျနော်ကိုပေကြည့်သွားတဲ့ ဦးရှင်စီးတော်ကျားအဖြစ် အလှူလိုက်ခံတဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ ဇာတ်စင်ပေါ်မှာ ဦးရှင်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တဖက်ကမ်းရောက်မှ ကျနော့သူငယ်ချင်းပြောပြလို့သိရတာပါ။ သူ့အကြောင်းပြောလို့ ကူးတို့ခပ်ရင်း ခပ်တက်နဲ့ ခပ်ပြီးကျနော်ကိုရေနဲ့ ပက်တာပါ၊ တော်သေးတာပေါ့၊ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းစီးရင်း ဘာမသိညာမသိ အဲဒီအကြောင်းသူ့ ကို သွားပြီး အာထုမိရင် ရေလယ်မှာ လှေကိုမှောက်များမလားမပြောနိုင်ပါ။ အဲသလိုဆိုရင်တော့ ဒီအကြောင်းတွေကို ကြောင်လေး အခုလိုဖောက်သယ်ချနိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါကြောင်း။
နောက်အတွေ့အကြုံလေး တစ်ခုကို ဆက်လက်တင်ပြဦးမှာပါ။
ကျုပ်အနေနဲ့တော့ နတ် ဆိုတဲ့စကားကိုလဲ သံသယရှိပါတယ်။
ပူး တယ် ဆိုတာကိုလဲ သံသယရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါက ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု့တမျိုးဆိုတော့ မဝေဖန်တော့ပါဘူး။
နတ်က တကယ်ပူးတယ်ဆိုရင်လဲ အဲသလို ပွဲလမ်းတွေမှာ ဇတ်တိုက်ပြီးပူးတာမျိုးမဟုတ်လောက်ပါဘူး။
နတ်ပွဲတွေ နတ်ကန္နားတွေ မှာ တွေ့ကြရတာကတော့ တမင်အက်တင်လုပ်ပြီး ပူးပြ ချော့ပြကြတာပါ။
အဲဒါကို နတ်ကတော်တွေကိုယ်တိုင်လဲ ၀န်ခံပါတယ်။
နတ်ပူးတာအကြောင်း တကယ်သိချင်ရင် ပူးဘို့ ပြင်ဆင်မထားပဲ ၀င်ပူးခံရတယ် ဆိုသူတွေတော့ ရှိပါတယ်။
ကျုပ်ငယ်ငယ် စကောစကဘ၀က ရင်းနှီးတဲ့ကန္နားစီးတယောက်အိမ်ကိုသွားလည်တုန်း ကျုပ်ကိုနတ်ပူးခိုင်းဘို့ ပြောမိတယ်။
အဲဒါ လူတွေရှေ့မှာ နတ်စင်ရှေ့ လက်အုပ်လေးချီခိုင်းပြီး ကုလားရေမွှေးနံ့တွေထုံထားတဲ့ နတ်ရေစင်တွေကို သပြေခက်နဲ့ယူပြီး ကျုပ်ကိုဖြန်း (တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ပုတ်တာ)
ပါးစပ်က ပါးစပ်ကတလှုပ်လှုပ်နဲ့ နတ်ပင့်တော့တာပဲ။
ကျုပ်ကလဲကြောက်ကြောက်နဲ့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ဘာဖြစ်လာမလဲလို့ စိတ်ထဲကစောင့်ကြည်နေမိတယ်။
ခဏနေတော့ နတ်ကတော်က သက်ပြင်းချပြီး ပြောတယ် –
“သူက မရဘူး ” တဲ့
ကျုပ်ကို လူမပြောနဲ့ နတ်တောင်သိပ်မကြိုက်တဲ့ သဘောပေါ့။
အင်းလေ.. လူတယောက်လုံးတောင် ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးနေမှဖြင့် ဘယ့်နှယ်လုပ်လိပ်ပြာက လှ ပါတော့မလဲ။
သူ့ဟာသူ မကြည့်မရှုမဆင်မခြင် နတ်ပင့်ပေးပြီးမှများ…..
အင်း နတ်မကြိုက်လို့ ကြောင်ရေနစ်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ သိချင်သား…
နတ်တွေ က မှန်မမှန်တော့ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ယုံကြည်မှုတိုင်းမှာ တန်ခိုးရှိပါတယ် ။
ငါက လူချမ်းသာလို့ ယုံကြည်ရင် လူချမ်းသာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ
အဲ .. ကိုကြီးကျော် ကို တစ်ကြိမ်လောက် ပိုက်ဆံ၁၀၀၀ ပေးပီး တာနဲ့ ငါလူချမ်းသာဖြစ်သွားပီလို့ ယုံကြည်ရင်လည်း .. လူချမ်းသာဖြစ်သွားမှာ .ပါဘဲ ..
ယုံကြည်တဲ့သူက ယုံကြည်ရင် .. ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် . . ယုံတဲ့သူကိုပဲပြောတာနော် ..
ဘုရားရှိခိုးရင်လည်း ယုံယုံကြည်ကြည် ဆုတောင်း .. ဒါဆို တကယ်ပြည့်မှာ ..
မယုံမကြည်နဲ့ ဆိုရင် ဘာမှ မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ ..
အနော်က တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလွဲ .. ဘယ်သူ့မှမယုံဘူး .. ဟီး ..
လူက.. ထူးဆန်းတဲ့.. တန်ခိုးသတ္တိတော့ရှိပါတယ်..
နတ်ပူးတယ်ဆိုတာ ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာပါပဲ.။ မူးနေရင်ပိုတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်..။
လောလောဆယ်တော့.. မီးနင်းတာကို.. ဆရာဝီကီက ဒီလိုရှင်းတယ်..ခင်ဗျ…။
Due to these properties, David Willey, professor of physics, says he believes firewalking is explainable in terms of basic physics and is not supernatural or paranormal. However, he adds, “The 120 foot walk done by Sara Raintree and Jim Jarvis, and reports of longer walks and people remaining stationary for extended periods on the coals are currently under investigation by the author.” Willey notes that most fire-walks occur on coals that measure about 1,000 degrees Fahrenheit (550 degrees Celsius), but he once recorded someone walking on 1,800-degree (1,000 °C) coals.
အဲဒီလို မပူးခင် မူးယစ်ထုံထိုင်းစေသော အရာတစ်မျိုးမျိုး ကို သေချာပေါက် စားသောက်ထားမည် မှာ အသေအချာ ပင် ။
တစ်ကယ်ပူးမပူးတော့ မသိဘူး..။ တစ်ခါသား …….. သာစည်ဘက်က ရွာတစ်ရွာမှာနေ၀န်းနီတို့ သွားတာ သုံးရက်နဲ့ ၇ွာမှာ အရက်ပြတ်သွားလို့ နောက်ဆုံး နတ်ကတော် တစ်ယောက်ဆီသွားပြီး နတ်တင်ထားတဲ့ အရက် ဇွတ်အတင်းစွန့် ခိုင်း ပြီး သောက်ဖူးတယ်…။ မူးထှာ….။ တအားပဲ…။ နတ်သောက်တဲ့ အရက်မို့ ကောင်းထှာလို့ ပြောတာပဲ…။ နတ်ကတော် ကအရက်စွန့်တိုင်ရင် တည့်တယ်..။ မတိုက်ရင် မတည့်ဘူး…။ ကိုကြီးကျော် လာမပြောနဲ့ နေ၀န်းနီက ခြေထောက်နဲ့ ကျော်တာ…။ ပိုတယ်…။
ကိုပါလေရာကို ပူးတော့မလား၊ပူးတော့မလားလို့ ဖတ်လိုက်တာ လိပ်ပြာမလှတာနဲ့ဆုံးသွားတယ်။
ကြောင်ရေနစ်ရင် ယက်ကန်ယက်ကန်ဖြစ်မှာပေါ့ မှော်ဆရာ။
ယုံကြည်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံစရာပါ၊ ကို/မ ဆိုင်မွန်။ ကျနော်ကနတ်မကိုးကွယ်တော့ ဘုရားကိုပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ထိုင်ဆုတောင်းနေမယ်။သူဌေးဖြစ်ပါစေ၊မိန်းမနောက်တစ်ယောက်ထပ်ရပါစေ။
သူဂျီးကလည်းတစ်ခါတည်းဘာသာပြန်လိုက်ရင်ပြီးရော။ သဂျီးပြောတဲ့ လင့်သွားကြည့်တာ Firewalking is practice ဆိုတာတစ်ခုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။
ကိုပေရေ သေချာတာပေါ့။ ဦးမင်းကျော်အကြောင်းပြပြီး ချလိုက်ကြတာ။
ကိုကြီးကျော်သောက်တယ်ဆိုတာ ကြွက်တွင်းနီ အဲလေ နေ၀န်းနီကိုဘယ်မှီပါ့မလဲ။
(ကိုနေရဲ့ ၄၂ ကိုသတိရသွားလို့)
နတ်ပူးမပူးးတော့ မသိဘူးးး အရက်တော့မူးးတယ်တဲ့…
ရုပ်ဝါဒီ ဆိုပြီး စွတ်စွဲချင်တဲ့ ဟိုဒင်းမတွေ
အမှန် အတိုင်းပဲ ပြောမယ်
နတ် ကို တော့ မမြင်ဖူးဘူး
လူပူး နဲ့ခွေးပူး
အားကစားပွဲတွေမှာသုံးခွင့်မရှိတဲ့ဆေးတွေအောက်မှာပြထားတယ်..။ ဆိုတော့..နတ်ပူးသူကို..အဲလိုဆေးတိုက်လိုက်ရင်..ဦးနှောက်က..လှမ်းခိုင်းတာမို့.. လူက..ပါဖောမင့်စွမ်းရည်မတရားတက်ပါတယ်..။
ယောဂကျင့်လို့.. အသက်ရှုတာထိမ်းချုပ်လွန်းရင်..ဦးနှောက်ထဲအောက်စီဂျင်ရောက်တာမမှန်သမို့.. အဲဒီလို ဂဂျိုးဂဂျောင်ဓါတ်တွေထွက်တတ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့်.. တချို့တရားထိုင်ရင်း.. ကြောင်ကုန်တာပေါ့…
ပြော၇ရင်.. ရှေးက အဲဒီဆေးတွေရှိမှန်းမသိသူတွေကို.. သိသူတွေညာချနေတယ်ထင်တာပါပဲ..။
သဂျီးဖော်မှပဲအကုန်ပေါ်ကုန်တော့တယ်။ အဲလိုလေ့လာစမ်းစစ်မှုမျိုးတွေ ရှိလာ/သိလာရင်
တဖြည်းဖြည်းတော့ လျော့လာမယ်ထင်တယ်။ အခုတောင်တော်တော် ပပျောက်လာပြီ
အမေကနတ်ကိုယုံကြည်နေပါတယ် ၊ကျမအလယ်တန်းဖြေဆိုစဉ်ကပါ ၊ ကျမကပထ၀ီဘာသာကျက်စာကို
အမှန်ဖြေထားတာကိုအမှားအောင်းမေ့ကာမျဉ်းတစ်ကြောင်းတည်းခြစ်ပြစ်မိခဲ့ပါတယ် ၊ စာမေးပွဲကျိမ်းသေကျမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပါတယ် အမေကနတ်မေးပြီးအောင်မယ်ပြောပါတယ်..
ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအဲဒီနတ်ကတော်ဆီသွားပြီးရန်တွေ့ ပစ်ပါတယ် နတ်ကတော်ကထုံးစံအတိုင်း
နတ်ပင့်ပါတော့တယ် ကျမလဲမမှိတ်မသုံသူလုပ်တာကိုစောင့်ကြည့်မိပါတယ် ကျမကနတ်ကိုမယုံကြည်ကြောင်း အမေဂျမ်းက၀င်ပူးပြီးပြောကြောင်း ကျမဖြေဆိုခဲ့ပုံတွေကို အာရုံခံပြောတာတွေကဟုတ်မှန်နေသလိုဖြစ်နေပါသည် နတ်ကတော်ပြောလိုက်တာက ငါကလိမ်စားတဲ့နတ်ကတော်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ ငါ့ယောက်ကျားနဲ့အကွဲခံပြီး ခေါင်းဆွဲရထားလို့ ရှစ်ပါးသီလ
ထိန်းစောင့်ကာအဓိဌာန်ဝင်ပြီးမှဟောရတာဖြစ်ကြောင်း ငါပြောတာမမှန်ရင် ညီးအဖေကိုလိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲခိုင်းဆိုပြီး ပြောပါတယ်
အဖေက မဟာယန ကိုးကွယ်ပြီး (၃၇) ပါးနတ်ရှိတာကိုမသိတဲ့အပြင် လုံဝလက်ခံသူ မဟုတ်ပါဘူး အမေက
နတ်ကတော်ဆီ ကိုသွားရင်ခိုးသွားရလို့ပါအမေကလွဲရင်တစ်အိမ်သားလုံးကမယုံပါဘူး ဒါကိုနတ်ကတော်ဆီမှာ အမေရင်ဖွင့်ပြောပြထားလို့နတ်ကတော်က ကောင်းစွာသိနေပါတယ် မယုံပေမယ့်စာမေးပွဲအောင်ခဲ့လို့ စာစစ်ဌာနထိ ခုံနံပါတ် မိဘနံမည် လွဲမှားမှုရှိမရှိ တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပြီး
အားလုံးမှန်နေလို့ နောက်ဆုံးစာအမှတ်စစ်တဲ့သူအထိ မေးမြန်းခဲ့သည့်အခါ အမှန်ဖြေထားပြီးအမှားထင်ကာ
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ စာကိုမျဉ်းတစ်ကြောင်းတည်းခြစ်ချထားလို့ စာခြစ်သူရဲ့ စေတနာအရ နောက်ထပ်တစ်နှစ်အောင့်ကနစ်နာမည်စိုး၍ အမှန်ပေးခဲ့ကာဖြေဆိုအောင်မြင်သွားတာ ဖြစ်ပါကြောင်း အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်၍
ကလေးကအောင်သည်မှာမှန်ပါကြောင်း ကံကောင်းမှုပင်ဖြစ်ပါကြောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့ပါတယ် ကျမဖြေဆိုခဲ့တာက အဝေးမှာပါ နတ်ကတော်ကမှန်လျှင်တောင်းပန်ရမည်ဟု
ဂတိတောင်းခဲ့သဖြင့် သွားတော့တောင်းပန်လိုက်ရပါသည် အမေလဲ ကျမကြောင့်နတ်ကတော်အား အရှက်ရ မျှက်နှာပူစေခဲ့သဖြင့်ထိုနေ့ထိုအချိန်မှစကာ နတ်မေးခြင်းအလုပ်အမေ မလုပ်တော့ပါ ..
နောင်ကျမအရွယ်ရလာသောအခါ သူအိုမင်းမစွမ်းရှိနေပါပြီ ကျမကသူ့ကိုနတ်လုပ်စားသေးလားဟုမေးလျှင် ရှစ်ပါးသီလ မလုပ်နိုင်တော့ကာ အဓိဌာန်လဲမ၀င်နိုင်သ
ဖြင့် မလုပ်စားတော့ကြောင်း ပြောပြခဲ့လျှင်စိတ်တွင်သနားမိခြင်း ဖြစ်မိကာ ကောင်းပါသည်ဟုပြောပြ
အဲလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကိုလည်းကြာဖူးပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့သမားတွေရဲ့ မှတ်တမ်းမျိုးစုစည်းထားသင့်တယ်။ နတ်တကယ်ဝင်တာဖြစ်နိုင်သလို သူ့မှာစိတ်စွမ်းအင်တမျိုးရှိနေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ တချို့က နတ်ဆိုတာနဲ့ပြောမှ ယုံကြည်ကြလို့ရောချတာမျိုးပေါ့။ တချို့ဗေဒင်ဆရာတွေတွေ့ဖူးတယ်၊ သူ့ဗေဒင်ကို လူမယုံကြည်မှာစိုးသလားမသိ၊ ပုဂ္ဂိုလ် ၀င်ပူးတယ်၊အကြားအမြင်ရတယ်ဆိုပြီး သွားမေးသူရဲ့
မွေးနေ့မွေးရက်တွေမေးတယ်၊ပြီးမှ အာရုံခံသလို ပူးသလိုလုပ်တယ်။ တကယ်တော့ သူဟာ ဗေဒင်ကိုစိတ်တွက်နဲ့ တွက်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိသူဖြစ်မယ်။ ပူးပြောတယ်ဆိုတာကို လူပိုအထင်ကြီးတော့ ပူးသလိုမျိုးရောချတာဖြစ်မယ်။ ပူးတယ် အကြားအမြင်ရတယ်ဆိုရင် ဗေဒင်ကိန်းခန်းတွက်တဲ့ မွေးနေ့မေးစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။
ကိုရင်စည်သူတို့ ဗေဒင်ဆရာတွေ ဘယ်လိုမြင်မလဲမသိဘူး။